John Manganaro Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na John Manganaro
John Manganaro ndiye VP yeChigadzirwa & Analytics ye KUDHARA, uko kwaanoona nezve chigadzirwa chigadzirwa uye data analytics, yakanangana nekubatsira vatengesi kubata yavo yekushandisa-mota hesheni zvinobudirira. Pakutanga, Manganaro anga ari manejimendi weManagement wePwC uye muridzi wechigadzirwa kumasangano eetekinoroji, kusanganisira Cars.com.
Muvhuro, Mbudzi 28, 2016 John Manganaro
Zvinoenderana neongororo ichangoburwa naZillow, zviuru zvemamirioni zvinopedza nguva yakawanda vachitsvaga, vachitenga-tarisa kuitira sarudzo yakanaka uye vachienzanisa mitengo usati watenga. Uye kunyangwe iyi nguva nyowani yemutengi-ane ruzivo mutengi achimiririra shanduko huru yemakambani nemakambani, inopawo mukana wegoridhe. Nepo vatengesi vazhinji vakachinja musanganiswa wavo wekushambadzira kuti vatarise pane zvinoitwa nedhijitari, zvakakoshawo kutora mukana wedura rakafanana re data iro nhasi